भगवान शिवको प्रिय महिना साउन, किन भनिन्छ साउन महिनालाई उत्कृष्ट महिना ? – Butwal Sandesh
भगवान शिवको प्रिय महिना साउन, किन भनिन्छ साउन महिनालाई उत्कृष्ट महिना ?
१- मरकन्डू ऋषिका पुत्र मारकण्डेयले लामो आयूका लागि श्रावण महिनामै घोर तपस्या गरेर भगवान शिवको कृपा प्राप्त गरेका थिए । जसबाट मिलेका मन्त्र शक्तिका अगाडि मृ*त्युका देवता यमराज पनि नतमस्तक भएका थिए ।
३. पौराणिक कथामा वर्णन गरिएको छ कि यसै श्रावण महिनामा समुद्र मन्थन गरिएको थियो । समुद्र मन्थन पछि नै कालकूट वि*ष निस्किएको थियो । जसलाई भगवान शिवले आफ्नो कण्ठमा समाहित गरेर सृष्टिको रक्षा गरेका थिए । तर वि*ष पानका कारण महादेवको क*ण्डा निलो रंगको भयो । जसबाट शिवको नाम ‘नीलकण्ठ महादेव’ पनि रहन गयो ।
विषको प्रभाव कम गर्नका लागि देवी–देवताले शिवलाई जल अर्पण गरे । यसकारण शिवलि*ङ्गमा जल चढाउनुको खास महत्व छ । यही कारण हो कि साउन महिनामा भगवान शिवलाई जल चढाउँदा विशेष फल प्राप्त हुन्छ ।
४.‘शिवपुराण’मा उल्लेख गरिएको छ कि भगवान शिव स्वयं जल हुन् । यसकारण जल अभिषेकको रुपमा भगवान शिवको आराधना गर्नु सबैभन्दा उत्तम फल हो ।
५.शास्त्रहरूमा वर्णित गरिएको छ कि श्रावण महिनामा भगवान विष्णु योगनिन्द्रमा हुन्छन् । यसकारण यो समय भक्तजन, साधु–सन्त सबैका लागि अमूल्य हुन्छ । यो चार महिनामा हुने एक वैदिक यज्ञ हो । जसलाई एक प्रकारको पौराणिक व्रत पनि मानिन्छ, र यसलाई ‘चौमासा’ पनि भनिन्छ । त्यसपछि सृष्टि सञ्चालनको उत्तरदायित्व भगवान शिवले ग्रहण गर्छन् । यसकारण साउनको प्रधान देवता भगवान शिव बन्छन् ।